တောင်ကိုရီးယား ဗဟိုတရားရုံးချုပ် အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွင် တရားသူကြီးဟောင်းကို အဓမ္မစစ်ဆေးမှု? - Yangon Media Group
တောင်ကိုရီးယား ဗဟိုတရားရုံးချုပ် အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွင် တရားသူကြီးဟောင်းကို အဓမ္မစစ်ဆေးမှု?
ဆိုးလ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရှေ့ နေများက တရားစီရင်ရေးအာဏာ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားသူကြီးဟောင်းတစ်ဦးအား အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ကစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ဗဟုိုတရားရုံး နှင့်တရားသူကြီးဟောင်းတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း ယွန်ဟတ်သတင်းက ဖော်ပြလိုက်သည်။
ယခင်အမျိုးသားတရားရုံး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (NCA) ဥက္ကဋ္ဌ လင်ဂျောင်ဟွန်မှာ တရားရုံးချုပ် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့၏အဓိက ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား နိုင်ငံတော် ရှေ့နေများက တရားစီရင်ရေး၌ ကိုင်တွယ်ကာ တရားမဝင်ဆုံးဖြတ် ချက်များချအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုဖြင့် သံသယရှိနေခဲ့သည်။ အသက်(၅၉)နှစ်ရှိ လင်အား ယခင်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး ချုပ်ယန်ဆောင်တေးအား ယခင်ကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရလက်ထက်၌ သမ္မတရုံးနှင့်ညှိနှိုင်းရာတွင် အသာစီးရအောင် အကူအညီပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ လင်မှာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၇ အထိ NCA ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ယန်၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့် NCA မှာ အရေးကြီးသော အမှုများအား သမ္မတပတ်ဂွမ်ဟေးထံ တင်ပြသောအခါ အသာစီးရအောင် လုပ် ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ”ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန် တော့်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တရားရုံးဟာ မမျှော် မှန်းတဲ့ပြဿနာပေါ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်လူထုကို တောင်းပန်ပါတယ်”ဟု တရားရုံးသို့အရောက်တွင် လင်ကသတင်းထောက်များကို ပြောပြခဲ့သည်။ သံသယဖြစ်မှုမြင့်တက်နေ ချိန်မှာ ကျွန်တော်သည် အမှန်အ တိုင်း တစ်ခုမကျန်နားလည်မှုလွဲ မှားမှုတွေကို ပြောကြားသွားပါမယ်ဟု လင်က ပြောခဲ့သည်။
၎င်းးအား ယန်ထံမှ ညွှန်ကြားချက် ရပါသလားဟုမေးခဲ့ရာ ကျွန်တော်သက်သေတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဟု ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအမှုတွင် မေးမြန်းချက်မှာ ယခင်ကရပ်နားထားခဲ့သည့် ဂျပန်၏စစ်ကာလ အဓမ္မအလုပ်သမား (ပေါ်တာ)ဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက် သောကျောင်းဆရာများသမဂ္ဂတို့လည်း ပါဝင်သည်။ လင်သည် ဤကိစ္စတွင် ယန်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူကို ဆက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးအဓိပ္ပာယ် ပြည့်ဝမည် ဟု ဦးခွန??
ရာမို့စ်ကို နောက်ထပ်တစ်ပွဲ ပွဲပယ်ကျခံစေရန် ယူအီးအက်ဖ်အေ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မသန်စွမ်းများ ပါဝင်လာခြင်းသည် ပြည်သူများကို ပါဝင်လာအောင် တ